‘सेल्फी किङ’ को कथा मेरो जीवनसँग मेल खान्छ : विपिन कार्की – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
‘सेल्फी किङ’ को कथा मेरो जीवनसँग मेल खान्छ : विपिन कार्की
By Digital Khabar On २४ पुष २०७६, बिहीबार १२:३८ 26 0
अभिनेता विपिन कार्की अभिनीत फिल्मको दर्शकमा निकै प्रतिक्षा रहने गर्दछ । हरेक फिल्ममा चुनौतीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनका फिल्ममा निकै गहन विषय पनि उठाइएका हुन्छन् । पछिल्लो पटक फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ मा देखिएका उनले यस वर्ष फिल्म ‘प्रसाद’ बाट उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड चुमिरहेका छन् । यस वर्षका लागि उनी दोस्रो फिल्म ‘सेल्फी किङ’ लिएर आउँदैछन् ।
‘प्रसाद’ का निर्माता सुवास थापा र निर्देशक दिनेश राउतले निर्माण गरेको यो फिल्म आउँदो माघ २४ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्मलाई विशाल सापकोटाले निर्देशन गरेका हुन् । कथा पनि उनकै हो । फिल्ममा विपिनले ‘सेल्फी किङ’ को उपनामले परिचित हास्यकलाकारको भूमिका निभाएका छन् । एक हास्यकलाकारको तीन दिनको कथा फिल्ममा उतारिएको छ । मंगलवार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको फिल्मको ट्रेलरलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् । पत्रकार र फिल्मकर्मीले पनि ट्रेलरलाई सराकात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसअघि पोस्टर र टीजरमा देखिएको विपिनको भिन्न लुक्सले फिल्मप्रति दर्शकमा कौतुहलता जागृत गरेको थियो । ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि फिल्मलाई लिएर दर्शकमा अझै उत्सुकता बढेको छ ।
‘सेल्फी किङ’ मा उठाइएको कथा आफ्नो जीवनसँग पनि धेरथोर मेल खाने अभिनेता विपिनले बताए । उनले भने, ‘फिल्मले उठाएको कथा हरेक सेलिब्रेटीको जीवनसँग मेल खान्छ जस्तो लाग्छ । सबै कुरा त मेल नखाला तर केही कुरा चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुनसक्छ । म पनि सेलिब्रेटी भएको नाताले मलाई पनि धेरैले चिन्ने भएका कारण फिल्मको कथासँग केही कुरा रिलेट गरेँ ।’ ‘सेल्फी किङ’ को टीजर र ट्रेलरमा अभिनेता विपिन कार्कीले बोलेको एउटा गम्भीर र चोटिलो संवादले स्टारडम भएका नेपाली कलाकारहरुलाई एकपटक सोच्न बाध्य तुल्याउँछ । ट्रेलरमा उनले भनेका छन्, ‘यो मुला स्टारडम, सेलिब्रेटी, पपुलारिटी, फ्रेम भन्ने कुरा छ नी मुतको न्यानो जस्तो मात्र हो । एकछिन तातो हुन्छ मज्जा आउँछ । एकछिन पछि घिन लाग्न थाल्छ ।
गन्हाउँछ ।’ यो संवादलाई अधिकांश फिल्मकर्मीले तीतो यथार्थ भनेका छन् । स्टारडमको बारेमा अभिनेता विपिन कार्कीको तर्क चाहिँ कस्तो छ ? मुतको न्यानो नै हो त स्टारडम भनेको ? फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भने, ‘फिल्ममा मैले निर्वाहा गरेको चरित्रले एउटा समयमा स्टारडम भनेको क्षणिक मात्र हुन्छ भन्ने सम्झन्छ । वास्तविक जीवनमा त्यस्तो हुन्छ वा हुँदैन थाहा भएन ।’
Digital KhabarNepali Film Industries
देशका धेरै ठाउँमा बर्षा र हिमपात
कृषि विकास बैंकले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी [सूचनासहीत]